Shiinaha Neoprene Cabitaannada Warshadaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Dadka haysta Cabitaanka Neoprene Waxa kale oo loo yaqaan koozie, way qaboojin kartaa, dhalada haysa, haystaha Beer. Waxaa laga sameeyay 3mm-5mm wax neoprene ah. Fudud Haystaha yar ayaa hayn kara 12 daasad OZ Cola / biir / sprite ama cabitaano kale. Cabbirka weyn ee dhalada galaaska ah ama cabitaanka dhalada caagga ah. Maaddadu waa t ...
Waxa kale oo loo yaqaanaa koozie, wuu qaboojin karaa, dhalada hayaa, haystaha Beer. Waxaa laga sameeyay 3mm-5mm wax neoprene ah. Fudud Haystaha yar ayaa hayn kara 12 daasad OZ Cola / biir / sprite ama cabitaano kale. Cabbirka weyn ee dhalada galaaska ah ama cabitaanka dhalada caagga ah. Maaddadu waa qaro weyn tahay si looga hortago isbeddelka heerkulka dareeraha si dhakhso ah. Waxaa ugu fiican tartanka isboortiga/isticmaalka baabuurka/waxqabadyada dibedda ama waqtiyo kale oo kala duwan si loo keeno cabbitaannada, si heerkulka cabbitaannada loogu dhowaado ka hor intaadan gelin. Markaa waxaad heli kartaa cabitaanno dhadhan oo aad u wanaagsan. Oo waa mid aan laga naxo, cabitaanka dhalada dhalada si fudud uma burburin doonto ka dib marka la geliyo hayahaan. Qalabkan oo kale waa mid la dhaqi karo, fududahay in la nadiifiyo, aan biyuhu lahayn, la kala bixin karo oo waari kara.
Waxyaabaha: Neoprene dhumucdiisuna waa 3-5mm
Naqshad: Qaab jira ama qaab loo habeeyay, sida funaanad.
Logo: Calaamadda gudbinta kuleylka/kuleylka.
Lifaaq: jillaab caag/bir ah ama giraanta kala -goynta birta ah. Waxa kale oo ay samayn kartaa xayndaabka dheeraadka ah. Kadibna waxay fududayn kartaa cabitaanka si fudud loo qaado.
Xiga: Furayaasha Furaha & Foogta Furaha
Caaryada Cake Silikoon
Suumanka Naxaasta ah
Baabuurka Diffuser Baabuurka Udugga